Baaro Waqtiga ugu wanaagsan ee baashaalka sariirta oo lasoo ogaaday | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Baaro Waqtiga ugu wanaagsan ee baashaalka sariirta oo lasoo ogaaday
Baaro Waqtiga ugu wanaagsan ee baashaalka sariirta oo lasoo ogaaday
Bulsha:- Sida ay ku talinayaan culimada ku takhasustay arimaha raaxada guurka ayaa ku talinaya in raaxada galmada macaantahay xiliga ay labada lamaane degan yihiin oo uusan jirin wax daal ah taasi waxay keeneysa in si macaan loogu raaxeysto baashaalka iyo galmada .
Jirka oo daalan lama helayo wax raaxo ah , waxana muhiim ah in istimtaacu dhaco iyadoo jirka fir-fircooni leeyahay oo uusan daalneyn nooc waliba ha ahaadee daalkasi .
Goobta baashaaalka ka bilaabanayo labada lamane ayaa waxa haboon in uu diyaar u yahay baashaalkasi isla markaana jirin wax wiiqaya in raaxo macaan ay helaan .
Raaxada baashalka ayaa ku bilaabaneysa hadalo jilicsan , dhunkashado iyo istiimin jirka intiisa kale iyo dhaq-dhaqaaqyada kale ee keena in dareenka kaco raaxana la dareemo.
Waxaa muhiim ah in labada dhinac ogaadaan mid kale waa suragal ah in ninka macaanka baashaalka dareemo una baahdo in galmood sameeyo halka xaaska ka gaarin baahidaas .
Marka baashaalka dhamaado xiliga waalida lagaarana oo la isu tago shaqadana dhaamato ayaa waxa ragga lagu tilanayaa in durba la soo bixin malabyarahooda waayo haweeneydu waxa ay u baahan tahay in xoogaa xaalku sidiisa sii ahado ayna hesho qoor gilin iyo dhunkasho macaan .